Sidee looga ilaaliyaa Coronavirus? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSidee looga ilaaliyaa Coronavirus?
Sida looga ilaaliyo coronavirus
Ma jiraan daawooyin loo muujiyey inay wax ku ool u yihiin coronaviruses maanta. Sababtaas awgeed, daaweyn ayaa la siiyaa bukaannada si loo yareeyo cabashadooda iyo in lagu taageero howlaha xubnaha tabarta daran, haddii ay jiraan. Dadka si shakhsi ah ugu safray ama booqday Shiinaha 14-kii maalmood ee la soo dhaafay waddankeenna waa inay xaqiiqdi la xiriiraan rugta daryeelka caafimaadka ee ugu dhow haddii ay leeyihiin astaamo ay ka mid yihiin qandho, qufac, iyo dhibaatooyinka neef-mareenka.
Waa maxay dariiqooyinka looga hortago VIRUS?
Coronavirus waxaa loo kala qaadi karaa bukaannada lagahelo coronavirus markii aan u dhowaanno wax kabadan hal mitir. Dadka jiran waa in aan lala soo xiriirin intii suurtagal ah. Si tan looga hortago, dadka jiran waa inaysan ugu tagin bulshada inta ugu badan ee suurtogalka ah, laakiin waa inay xirtaan maaskaro haddii ay tahay inay baxaan.
Is-gacan-qaad aad u fara badan iyo xirnaashaha waa in laga fogaadaa.
HABARKA KA HORTAGGA EE XAALADA KHUDBADAHA
Markaan qufacno ama hindhisto, haddii aannan haysannin wax gogosha ah, waa inaan ku hindhisaan ama ku qufacno gacanta. Kani waa hab lagu ilaaliyo oo keliya loogu talagalay coronavirus, laakiin sidoo kale loogu talagalay hargabka iyo hargabka kale.
Nadaafadda gacmaha ayaa aad muhiim u ah. Waa inaan hubinnaa gacmaheena isla markaaba aan guriga ka soo baxno. Saabuun iyo biyo badan intii suurtogal ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu maydho faraha dhexdooda, qaybta kore ee gacanta, calaacasha, ka dibna la qalajiyo. Kaliya maahan in biyo la dhex maro.
Waa inaan haysanaa gacmo nadiifiyeyaal aan u baahnayn biyo inta aan dibadda u baxno maalintii. Waa mid waxtar leh in la isticmaalo dawooyinka jeermiska dila marka aan dhammeyno shaqadeena markii aan dukaameyneyno suuqa markaan ku safreyno metrooga, basaska.
QIIMAYNTA AMAANKA DADWEYNAHA
Waa in ay hawo haysaa si joogto ah.
Feejignaanta waa in lagu bixiyaa nadiifinta dusha sare. Haddii la tirtiro 2 jeer maalintii, lambarkan waa inuu labanlaabmaa. Tani waxay u socotaa guriga.
Nadiifiyeyaasha gacmaha waa in laga heli karaa meelahan.
WAA INAAD U SAMEEYSAA HOSPITAL HADA
Marka lagu daro astaamaha hargabka iyo ifilada, dadka dhallin-yarada ah ee aan wax cudur ah qabin waa inay la tashadaan dhakhtar marka ay neefsadaan.
Kuwa qaada kansarka, cudurka kalyaha, ku-tallaalidda wadnaha, iyo kuwa xakameynaya nidaamka difaaca waa inay isla markiiba aadaan isbitaalka, xitaa astaamaha caadiga ee ifilada.
KU SAABSAN ISTICMAALKA MASKAXDA
Wuxuu sharraxay in Wasaaradda Caafimaadka aysan u baahnayn inay xirto maaskaro dadka aan buka ahayn. Waxaa la sheegay in xirashada maaskaro ay kuu horseedi karto "dareen been ah oo amniga ah". Markuu xidhayo maaskaro, aragtida 'ok waa la ilaaliyay' ayaa dhacaya. Kuwa jiran waxaa lagula talinayaa inay xidhaan maaskaro. Aad ayey muhiim ugu tahay dadka aan bukaanka ahayn inay qaataan taxaddarrada lagama maarmaanka ah ee aan tirineyno ka hor intaadan xiirin maaskaro.
Sidee buu u shaqeynayaa?
Sidee Mashruuca Marmaray u saameynayaan gaadiidka badda? Waa maxay tallaabooyinka la qaadayo?
Sidee Mashruuca Marmaray u saameeyaa gaadiidka badda
Sida loo sameeyo Tareenka Tareenka
Yaa Ku Dhamaynaya Madaarada Tareenka
Sidee loo xalliyaa dhibaatada gaadiidka ee Bursa?